Uninzi lwabantwana abasebancinci aluqhathanise negama elithi "ukuzonwabisa". Abazali benze isigqibo esizimeleyo kunokuba bathathe umntwana. Ukuze ungabi ngutshaba lwakho, mamela oko akutshoyo noko akufunayo. Le yinyaniso eyona nto iya kukunceda kuphela ngokufanelekileyo ukulungelelanisa ukuphucula komntwana wakho, kodwa nokufezekisa ukuvisisana nokuqonda naye. Kubalulekile ukuba umzali ngamnye ahlaziye ixesha lokuphumla lomntwana wakhe. Indlela yokwenza oku, siya kuthetha ngale nto kwinqaku ethi "Yintoni enokuyenza ngethuba lokuphumla lomntwana."
Yiliphi ixesha elifanelekileyo lokuphumla komntwana? Ewe, abazali bafuna ukuba abantwana babo baqulunqwe ngokupheleleyo. Namhlanje kukho inamba enkulu yemidlalo ehlukeneyo yemfundo, kwizikolo kukho zonke iintlobo zezinto ezintsha.
Umntwana wakho esikolweni esiprayimari.
1. Hamba ngqo ekhaya. Abanye abazali banqwenela ukuba umntwana wabo emva kokuya esikolweni waya apho, wahlala apho, wababiza. Ngokuqinisekileyo, isidlo sakumama sikamakhaya sinomdla ngakumbi kunokutya kwesikolo. Yaye yinto efanelekileyo yokuchitha ixesha elithile ngokuthula. Kodwa apha kukho ingxaki, indlela yokulandela umntwana ukuba aphumle, akazange adibanise. Kwaye ke ekufikeni kwabazali, umntwana, ukuba ahlaziye yonke imisakazo kwiTV, okanye ehleli kwikhompyutha ngexesha lonke, ukhathele uqala ukuqala izifundo. Ukunika amandla akuyena wonke umntwana wesikolo. Kwaye akunakunceda ukuba ubiza umnxeba ngamnye kwaye ufumanise ukuba ngaba wenza izibalo. Kule meko, kukulungele ukuvuma kwangaphambili, ngeliphi ixesha izifundo kufuneka zenziwe. Ewe, kwaye akuyi kubuhlungu ukuseka isohlwayo sokungaphumeleli. Ukongezelela, umntwana kufuneka ancedise malunga nendlu. Xoxa kusengaphambili - uye kwivenkile, iifatayi zeeyile, uhlambe izitya, njl njl.
2. Ixesha elide. Xa indlu inomkhulu kunye noomkhulu onokukwazi ukulawula umntwana, kulungile. Kwaye ukuba akunjalo? Xa abazali bebonke emini emsebenzini, kwaye akukho namnye onokumnakekela umntwana, ukuhlala kwandiso lomfundi kuphuma nje kubazali. Ngaphambi kokufika kwabazali, umntwana akasishiyi esikolweni. Ngaphantsi kolawulo lwe-titshala-titshala, umntwana uya kwenza izifundo. Ukuba kuyimfuneko, utitshala unokukunceda wenze umsebenzi wakho wesikolo. Ukusetyenziswa kwexesha elichithwe apha ngqo kuxhomekeke kumfundisi. Ixesha eliqhelekileyo lisebenza ngokusemgangathweni: kokutya, ukuhamba ngaphandle, ukwenza umsebenzi wesikolo eklasini. Kwiqela lexesha elongezelelweyo thabatha bonke abaza. Uninzi lwezikolo ziqhuba iiklasi zenzalo. Ingaba ngumculo, umdwebo, njl. Ukuba urekhoda umntwana kwandiso, unokutyelela loo mijikelezo ngexesha lakhe elithile. Ngoko uya kuba phantsi kolawulo kunye nakwizenzo.
3. Iinkqubo zangaphandle. Injongo yeeklasi kumacandelo okanye kwimijikelezo kukuba kuthathe ixesha lexesha labafundi, ukuba banomdla kubo. Ngokuqhelekileyo ngoSeptemba izindlu zezobugcisa zezingane zihlala zivule iintsuku. Wena nomntwana wakho unako ukuya kwiiklasi ezinjalo, jonga ngokujonge. Kwenzeka ukuba umntwana wagqiba kwelo xesha ukuba abhalise kwiibonda ezi-10 ngexesha elilodwa. Musa ukukoyikisa oku. Makubhalwe kwaye uqale ukutyelela. Ngenyanga nje, uya kuba nako ukugqiba isigqibo. Endaweni ethile ayithandi loo nto. Endaweni ethile ayiyi kusebenza okanye ishedyuli yokutyelela umgudu ayiyi kuhambelana nawe. Ngenxa yoko, kuya kuba nama-mugs 2-3 okanye amanqaku. Ukuba ufumanisa ukuba umntwana unemihla yonke ebhalwe phantsi ngomzuzu, ungavumeli ukuba oko kukuthusa. Umthwalo onjalo uqeqesho kuphela, uya kunceda ukulungisa ixesha lakho ngokuchanekileyo. Kuyaziwa ukuba umfundi ophethe iiveki ezipheleleyo zesikolo kunye nemisebenzi yecandelo elongezelelweyo unethuba lokufunda kwaye lungcono esikolweni.
Indlela yokuhlaziya ixesha lokuphumla lomfundi wesikolo esiphakamileyo?
Kumntwana wakho evakalelwa uthando lwabazali bakhe, kufuneka ubuncinane ubuncinane iiyure zokuchitha kunye naye. Sekuyisikhathi eside ukuba izazi zengqondo ziqaphele ukuba xa abazali nabantwana bedlala, babukela iTV, balalele iingoma, badibanise nabantwana babo. Ukuba umntwana wakho uchitha ixesha lakhe lokukhululeka kwikhompyutha, oku kwakhona kubonisa ukuba abazali abanalo ixesha okanye banqwenela ukuyisebenzisa kumntwana. Zama ukukhathalela umntwana ngezinto ezithandwayo. Iingcali zengqondo zithi iiklasi ezenza uvuyo, lukhuselo oluhle kunoma yintoni na ubunzima. Yingakho kubaluleke kakhulu ukuthetha ngokugqithiseleyo umcimbi, yintoni oyenzayo ngokuzonwabisa? Nakhu kufuneka siqhubeke nomntu womntwana, iiminqweno kunye neminqweno yakhe. Ziziphi iindidi zomdla ezinganikeli ngamaziko emisebenzi yecandelo lexesha. Lo mzobo, ukugqithisa uboya, ii-studio ezihlukeneyo, ii-studios studios, unokuzama isandla sakho kwisiteji, njl.
Ezemidlalo kunye nodaniso. Kutheni ungazami kwimidlalo ethile. Umzekelo, i-aikido. Igama lihle kwaye aliqhelekanga. U-Aikido ngumzabalazo oza kufeza ngokufanelekileyo umfana kunye namantombazana. U-Aikido ufundisa ukuvisisana kwangaphakathi kunye nokukwazi ukuzimela kunoma yiphina imeko. Apha, wonke umntwana uya kuzuza iziphumo ezinkulu. Kukho iintlobo ezininzi zemidlalo kuyo yonke into. Into ephambili kukuba uwatyelele ngentshiseko. Ixesha lokuzonwabisa elihle nelincedo livakatye kwicandelo lokudanisa ibhola. Ukudansa ibhola akukhenkceli kuphela amantombazana, kodwa kunye namakhwenkwe. Ukudansa ibhola kuya kufundisa umntwana ukuba ahambe kakuhle, ukuziva umculo, kodwa nokugcina isimo esihle. Kodwa into ephambili ayikunyanzela ukutyelela echibini, ukuba umntwana uphupha ukwenza umculo kwaye, ngokuchaseneyo, ngokuphambene.
Ukuzilibazisa kwengqondo yomntwana. Ngokubhekiselele ekuphumuleni kwengqondo, ngokokuba ngamnye umntwana kufuneka abe nokuphumla kwengqondo. Oku kuya kuba sisiseko solwazi olutsha. Umntu kufuneka aphuhliswe ngokupheleleyo. Ewe, ukuba umntwana unomdla wokudlala i-chess okanye i-checkers. Le midlalo iyakwazi ukuphuhlisa ikhono lamathematika lomntwana. Akukho mnqweno wokubandakanya i-chess kunye nabahloli? Zama ukuba nomdla wokudlala i-monopoly. Nangona umdlalo wezinto eziphathekayo awuvelanga nje kuphela umatshini weminwe, kodwa ingqalelo, ukucinga okunengcamango.
Sikucebisa ukuba uqaphele ukutshintshwa kwezinto ezahlukeneyo zokuzonwabisa ngexesha. Yonke into yokuzilibazisa inexesha layo. Umzekelo, kwimidlalo efanelekileyo, ixesha elifanelekileyo livela kwi-3 ukuya kwi-5 iiyure zomhla. Ngeli xesha, ingqondo ikwazi ukugxininisa ingqalelo. Ngokuhlwa, kukulungele ukuqhuba imidlalo nomntwana. Ukwahlula ixesha lokuzonwabisa, kwaye umntwana uya kukhula umntu ophilileyo kunye nohlakaniphile.
Naliphi na ikomishi ilungile ngendlela yabo, kodwa into eyona nto kukuba bazisa uvuyo kumntwana. Ungazami ukuzalisa lonke ixesha lokukhulula lomntwana. Emva koko, kufuneka kwakhona abe nexesha lakhe. Kuxesha lokukhulula lokuba umntwana ufunde ihlabathi, ubonisa. Konke kulungile ekumodareyithweni.
Izenzo zokuzivocavoca kwabantwana abangaphezu kweminyaka eli-1 ubudala
Ukuphuculwa komzimba komntwana kwasebuntwaneni, ukukhula kwasekuqaleni kwaneminyaka yobudala
Iikaroti ezenziwe ngamarzipan
Cocktail "Margarita" kunye ne-rhubarb
Yintoni udade (ozala kunye nomzala wokuqala)
I-cocktail yobisi kunye nebhanana